China EEC L3e Soosaarayaasha Mootooyinka Korontada iyo alaab-qeybiyeyaasha |Yunlong
Meelaynta: Knight mootada korantada waa talaabada xigta ee kobcinta mootada.Dardargelinta cajiibka ah ee RPM kasta, khadadka fiiqan iyo ergonomics-ciyaaraha ayaa u beddela safarkaaga maalinlaha ah mid xiiso leh.
Safar maalmeedka, wadista masaafo gaaban.Bixi darawal degdeg ah oo xanaaq badan, ku wadid wax ka badan.
Nolosheennu waa in aanay ku dhex milmin buuqa iyo buuqa waddada.Naftaadu ha is dejiso.
Soodeji16 unug oo loogu talagalay 1*20'GP, 32 unug oo ah 1*40'HQ.
Lugta taageerada:Lugta taageerada hoose, baarkin deg deg ah oo fudud oo aan dadaal lahayn.
Battery:Kordhi qaybta batteriga72V86Ah baytari lithium, badbaado leh, baaxad dheer
Habka biriiga:Kahor iyo ka dib bareegga saxanka weyn, nabadsugidda ayaa gelbinaysa. Marka biriiga degdega ah la qabto, waxa ay sidoo kale si xasaasi ah oo fudud u jabin kartaa.
Kursiga:Kooradii isbuunyada xusuusta ee dib-u-cusboonaaday ee dhumucnayd, dhumuc iyo dareen raaxo leh, waxay ku habboon tahay xuubka sinta, aad u raaxaysan oo aan daalin fadhiga wakhti dheer.
Fudud iyo xarrago leh, baabuurta baabuurta rinji heer sare ah, nalka hore ee nalka sare, barkin raaxo leh oo laba qof ah, keeno waayo-aragnimo baaskiil maalinta oo dhan. Biyo-bax degdeg ah, xajin xoog leh.
Matoorka waxtarka sare leh, badbaadinta korontadu waxay badbaadisaa dherer cusub. Awoodda sare ee awoodda korantada ee korantada, isdhexgalka kheyraadka kala duwan, iyo qaabeynta qaabeynta qaabdhismeedka gudaha si loo gaaro kororka matoor caqli-gal ah, yareynta khasaaraha hadda jira, awoodda awoodda awoodda balaarinta, waxqabadka sare wuxuu ka dhigayaa fuushan mid ammaan ah. .
Shaashadda LCD ee HD, jawaab degdeg ah oo aan soo jiidin hooska, tayada sawirka cad oo deggan, iftiinka iftiinka xooggan ayaa weli cad, xaaladaha wadista ee jaleecada, si ay u safraan welwel badan.
Nidaamka dhimista naxdinta
Nidaamka nuugista shoogga ee hore iyo dambe, cabsi kama qabo qas
Naqshad saddex-indho ah oo fiiqan, iftiinka iftiinka ayaa dheer, moodo soo jiidasho leh, ha ka baqin mugdiga.Nalalka dabada leh ee quruxda badan.Qadhaadh badan, sii ifaya oo ifaya, waxaa laga arki karaa meel fog, si wax ku ool ah u wanaajinaya tusmada badbaadada ee wadista habeenkii.
Naqshadeynta taayirka vacuum-ka-hortagga, bareegga xasaasiga ah, qabsashada xooggan. Waxay qabataa caag tayo sare leh, dhumucduna waxay ka hortagtaa lakabka siligga birta qodxaha leh, naqshadeynta jeexdin, waxay siisaa biyaha dheecaanka wanaagsan ee taayirka.
Nidaamka Xakamaynta Fog
Kontoroolka fogaanta caqliga leh, ka dhig gaarigaaga mid badbaado leh.Farsamooyin badan oo ka mid ah qalabka digniinta ka hortagga xatooyada, qaab fudud, oo raaxo leh in la qabto, waxay ku xiri kartaa baabuurka hal fure, raadinta baabuurka fog, fur furaha hal furaha, hawlaha alaarmiga ka hortagga tuugada.
Hawsha-ka-hortagga simbiriirrada ee heer-baabuur oo hawl-badan leh, si heerka guul-darradu u yaraado, si maarayntu u wanaagsanaato, iska caabin yar, si buuxda ula kac bilaw kasta oo dardargelin ah
Tilmaamaha Farsamada Heerka EEC L3e Homologation
Miisaanka Jidka (Kg)
86Ah Battery Lithium
20A Charger dusha sare ah / 6 saacadood (220V)
Hawlaha CBS (Nidaamka Braking-ka Isku-dhafka ah)
Hore: 130/60-13 Gadaal: 130/60-13
Si naxariis leh u fiirso in dhammaan qaabaynta ay tahay kaliya tixraacaada iyadoo la raacayo isu-ekaanta EEC.
Hore: EEC L6e Koronto Cabin Car -X5
Xiga: EEC L7e Gaadhiga Xamuulka Korantada